Yes to No-Rinse Shampoo Cap!!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Yes to No-Rinse Shampoo Cap!!!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ Product အသစ်ဖြစ်တဲ့ အလန်းစား Yes to No-Rinse Shampoo Cap နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Product လေးဟာ ခေါင်းကို ရေနဲ့ လျှော်စရာမလိုဘဲ Cap လေး အသုံးပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းလှပတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆံသားနဲ့ ယားယံတတ်တဲ့ ဦးရေပြားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေ အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက် အစိမ်းရောင် Yes to Tea Tree, ဆံသားကောက်ကောက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်သူတွေအတွက် Yes to Superblueberries, ပျက်စီးကျိုးပျက်နေတဲ့ ဆံသားတွေအတွက် Yes to Grapefruit ဆိုပြီး ၃ မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Yes to Grapefruit မှာ ဆံသားအရောင်တောက်ပြောင်လာစေဖို့ရန်အတွက် Vitamin C ပါဝင်ပြီး ကောက်သားပိုမိုပေါ်လွင်ဖို့ရန်အတွက် Superblueberries မှာ Yogurt ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယားယံတဲ့ဦးရေနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံသားတွေကို အားပြန်ဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက် Tea tree နဲ့ Sage Oil တို့ Yes to Tea Tree မှာပါဝင်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ Cap ထဲကို ဆံပင်အားလုံးဝင်အောင် ထားရပါမယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ Cap ဆောင်းထားပြီး Cap ပေါ်ကနေ ၁၀ မိနစ်ခန့်နှိပ်နယ်ပေးရပါမယ်။ Cap က ရေစိုခံတဲ့အတွက်ကြောင့် ရေချိုးရင်းလည်း အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ Cap ကို ချွတ်လိုက်တဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံပြီး လှပတဲ့ ဆံသားကို တခဏအတွင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေလဲမစို၊ ဦးရေပြားလဲသန့်၊ ပုံလဲကျဆိုတော့ ဘယ်အချိန်မဆို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။ သဘာဝပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဦးရေပြားပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့်4$ ကျသင့်ပြီး ဝယ်ယူလိုပါက Scarlett Online Shop မှ တဆင့် မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Tags: Hair CareHair Care Accessories